Breaking – Yuwa Aawaj
काठमाडौं : ज्ञानेन्द्र शा'हीको स’मूहमा' थि सुर्खेतमा आ’क्र म’ण भएको छ । जिल्लाको वीरेन्द्र नगर नगरपा'लिका–१३ करेखो ला भन्ने स्थानमा गएराति ११ बजे आ’ क्र मण भएको हो । जिल्ला प्रह’ री का’र्यालय सुर्खेतलेआ’क्र मणमा सं’लग्न पाँच जनालाई नि य’न्त्र णमा लिएको जनाएको छ ।सुर्खेतका प्र’हरी प्र’मुख राजेन्द्र भट्टले शा हीको स’मूह र स्था नीयबीच झ' ड’प भएको बताए । एसपी भट्टले भने, ‘यो आ’ क्रमण भन्दा पनि दुई समू’हबीच झ’डप भएको हो । प्रह’री टो ली घ’ ट नास्थ’लमा पुगेर उ’ द्धा’र गरेको छ ।’ उनले आ’ क्रम णबाट घा ’इ’ते भएकाहरुको अव’स्था सा मान्य रहेको पनि बताए । सा’माजिक सन्जा’लमा पो ष्ट भएको एक भि’डियोमा शाहीले रुँ’ दै घा ’इते एक युव’कलाई अँ गालो हालेको देखिन्छ । टा ’उ को को पछा’डिको भा गबाट र ग ’त बगिरहेको देखिने ती युवकको प्रा थ’मिक उ’ पचार पनि गरेको देखिन्छ । शाहीले सा’माजिक सन्जालमा आफू सहित र
ट्रक भरी सामान लिएर मानिसहरूको ज्यान बचाउन निस्केका ज्ञानेन्द्र शाही र उनका टिममा’थी नि’र्घात कु’टपि’ट !
१० करोड बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री लिएर देश दौडाहा मा निस्केका कलाकार तिलक बस्नेत , अभि'यान्ता ज्ञानेन्द्र शाही र शान्त शर्माको टिम माथी शुक्रवार मध्य'रातमा निर्घा’त कु’टपि'ट भएको कुरा सामाजिक संजाल मार्फत कलाकार तिलक बस्नेतले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उनले लेखेका छन : “समय रातिको १० बजे करे खोलामा कु'टपि'ट भयो, म लगायत मेरो गाडीमा भएका अभियान्ता बाच्न सफल भयौ तर ग्यानेन्द्र साही बसेको गाडि तोड’फोड र आ’कर्मण भयो भग्वान बचाइदेउ ।” वि'स्तृत विवरण आउन बाकी… यो पनि,,,,हार्दिक नमन ! सल्यान पुगेर ज्ञानेन्द्र शाहीले दिए ५ लाख बराबरकाे स्वास्थ्य !सल्यान : “हाम्रो नेपाल हामी नेपालि”का संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीले सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामाग्री सहयाेग गरेका छन् । शाहीको पहलमा स्वास्थ्य सामाग्री आएको हो । गाउँपालिकाको को-भि’ड अस्पताल भोटेचौरलाई २ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, १०
काठमाडौ : महामा'री नियन्त्र'णका लागि लागू गरिएको काठमाडौं उपत्यकाको निषे'धाज्ञा सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । अवधि सकिनै लाग्दा फेरी उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु छलफलमा जुटेका छन् । निषे'धाज्ञाको अवधि जेठ ३१ पछि सकिदै छ । तर सिडिओहरु त्यस पछि पनि लम्ब्याउने योजनामा रहेकोे बुझिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले यस विषयमा तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच छलफल भइरहेको पु'ष्टि गरेका छन् । महामारीको चेन ब्रेकका लागि थप निषेधा'ज्ञा जारी राख्ने र स्वास्थ्यको मापद'ण्ड अपनाउँदै केही सेवा भने खुकुलो बनाउने बताइएको छ । प्रजिअ पराजुलीले त्यसका लागि होमवर्क थालिएको बताए ।उनका अनुसार अवस्था विचार गरेर जेठ ३१ पछि के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ । तर संक्र'मणको अवस्था अझै सामान्य भइनसकेकाले निषे'धाज्ञा लम्बिने नै
काठमाडौं : बरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठ को'रोना सं'क्रमणमुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चा'र्ज भएका छन् । को'रोना पु'ष्टि भएको केही दिनपछि शरीरमा अ'क्सिजनमा मात्र कम भएपछि धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पताल भर्ना भएका गायक श्रेष्ठ १६ दिनपछि डि'स्चार्ज भएका हुन् ।गायक श्रेष्ठ स्वस्थ भई घरमै बस्न मिल्ने भएपछि अस्पतालले विहीबार दिउँसो डि'स्चार्ज गरेको हो । जानकारी अनुसार गायक श्रेष्ठ अब केही दिन घरमै आइ'सोलेसनमा बस्नेछन् । करिब दुई साता आईसीयूमा अक्सिजनको सहायतामा बसेका गायक श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि गत मंगलबार मात्रै आ'ईसीयूबाट क्याबिनमा सारिएको थियो । विपक्षी गठबन्धनको बैठक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा जारी छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित
काठमाडौं : भारतको देहरादुनमा सडक दु’र्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएकी मोडल निशा घिमिरेको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएको छ । अढाई वर्ष अघि मोडलिङ पढ्न दे’हरादुन पुगेकी निशाको त्यहाँ सडक दु’र्घटनामा परी ‘ब्रे’न इ’ञ्जुरी’ भएको थियो । निशाका बुवा राजु घिमिरेका अनुसार बिहीबार दिउँसो निशालाई नर्भिकमा भर्ना गरिएको छ । ‘देहरादुनमा दु’र्घटना भएपछि त्यहाँ प्रारम्भिक उपचार गरेर काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा ल्याई बाँकी उपचार गर्यो । त्यसपछि छोरीलाई घरमा लगेर रेखदेख गरिरहेका थियौं’, राजुले भने । राजुले हालसम्म निशाको उपचारमा करिब ३० लाख रुपैंयाँ खर्च भइसकेको बताए । ‘सुरुमा छोरीको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको थियो । पछि हामी आफैंले पनि उपचार गर्यौ’, उनले भने ।घरका चार सन्तानमध्ये निशा कान्छी हुन् ।बाल्यकालदेखि नै मोडल बन्ने चा’हना राखेकी उनले तीन दर्जन म्युजिक
काठमाण्डौं : दुर्घ'ट नामा परेर तीन वर्षदेखि मृ' त्युशै यामा छट'पटाइरहेकी कलाकार तथा मोडल निशा घिमिरेको उ 'द्धार गरिएको छ । नर्भिक अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले मोडल तथा कलाकार घिमिरेको आज उ'द्धार गरेकी हुन् । तीन वर्षअघिसम्म मिडियाहरुमा छाउने गरेकी मोडल निशा घिमिरेको अहिलेको अवस्था पत्याउनै नसक्ने ‘द' र्दना'क’ रहेको छ । चलेकी मोडल निशा आर्थिक अभावका कारण उप' चार नपाउँदा घरमै अ' र्धचेत अवस्थामा थन्किएकी थिइन् । तीन वर्षअघि अभिनयको कोर्स पढ्न उनी भारतको देह'रादून जाँदै गर्दा सडक दु'र्घट' नामा परी ग' म्भीर घा' इते भएकी थिइन् । दु' र्घ टनालगत्तै उनको भारतकै अस्पतालमा उप'चार गरिएको थियो । तर, त्यहाँको अस्पतालको उ'पचार म'हङ्गो भएपछि कम'जोर आर्थिक अवस्थाका उनका बुबाआमाले छोरीलाई नेपालमै ल्याएका थिए । काठमाण्डौमा ल्याएर ट्र'मा सेन्टरमा राखेर ३ महिनासम्म उ'पचार गरिएको थिय
काठमाडाैं : को-भि’डका कारण देशका अधिकांश भागमा 'निसे-धाज्ञा लगाईएको छ । तर, जु’वाडेका जु’वाखाल चौबीसै घन्टा चलिरहेका छन । जहाँ प्रत्येक दिन करोडको कारोबार हुने गर्छ । हार र जितको शृङ्खला पनि सोही रफ्तारमा अघि बढ्ने गरेको प्रह'रीको भनाई छ । केही साताको अन्तरमा काठमाडौंका केही जु’वाखालमा गरेको प्र'हरीको छा’पाले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी रमेश बस्नेतले निषे'धाज्ञाको अवधिमा काठमाडौंभित्र जु’वा मौलाएको जानकारी दिए । ‘प्रहरीले प्रत्येक दिनजसो कहीँ न कहीँ छा’पा मा’र्दै आएको छ । घ’टनास्थलबाट पाँचदेखि २५ जनासम्म पक्रा'उ परेका छन् । नगद पनि उत्तिकै ब’रामद भएका छन् । यी तथ्यबाट के देखिन्छ भने काठमाडौंभित्र निषेधा'ज्ञाको अवधिमा जु’वा मौलाएको छ । ’प्रहरीका अनुसार निषे'धाज्ञाको करिब ४० दिनमा काठमाडौंबाट मात्रै ७७ जुवाडे पक्राउ परेका छन् । प'क्राउ
काठमाडौं : सरकारले जारी निषे'धाज्ञा ‘मो'डालिटी’मा केही परिवर्तन गरी ‘लुज'डाउन’ शैली अपनाउने तयारी थालेको छ । दोस्रो च'रणको कोरो'ना सं'क्रमण सुरु भएपछि गत १६ वैशाखबाट जारी निषे'धाज्ञाको ‘मोडा-लिटी’ सर्वसा'धारणको दैनिकी र जनजीवन सहज बनाउनेगरी जारी राख्ने तयारी गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार सोमबार साँझसम्म देशका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा निषे'धाज्ञा छ । खोटाङ र मनाङमा भने निषे'धाज्ञा छैन । पछिल्लोपटक काठमाडौं उपत्यकामा ३१ जेठसम्म निषे'धाज्ञा तोकिएको छ । गृह मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब निषे'धाज्ञा शैलीमा दैनिक जनजीवन सहज बनाउनेगरी परिमा'र्जन गरिने जानकारी दिएका छन् । ‘निषे'धाज्ञा अहिले तत्काल हट्दैन, तर मोडा'लिटीमा परिवर्तन गरिन्छ, अब निषेधा'ज्ञा लुज'डाउन शैलीमा जनजीवन सहज बनाउनेगरी अझै केही समय जारी रहन्छ,’ गृह प्रवक्ता दाहालले सोमबार राजधानीसँग भने । गृह मन्त्रा
सुर्खेत : गु'र्भाकोट नगरपालिका–११ का दुई युवतीमा'थि यौ'न दु'व्र्यव'हार भएपछि प्रदेश सरकारले राउटे बस्तीमा बाहिरका मान्छेहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार मान्छेहरूलाई बस्तीमा प्रवेश रोक्नका लागि करिब तीन दर्जन सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अहिले त्यहाँ अन्य कसैलाई पनि प्रवेश गर्न दिइएको छैन । अहिले सशस्त्र प्रहरी निरी'क्षकको क'माण्डमा ३४ जनाभन्दा बढी प्रहरी ख'टाइएको छ ।’ केही दिनअघि दुई राउटे युव'तीमा'थि यौ'न दु'र्व्यव'हार भएको भिडियो भाइरल भएपछि प्रह'रीलाई राउटे बस्तीमा सुरक्षा क'डा बनाउन निर्देशन दिइएको छ । दुई युव'तीमा'थि भएको घटना निन्दनीय भएको बताउँदै दोषीलाई कडा का'रवाही गर्न निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए । राउटे बस्तीका युवती'लाई पूर्ण रुपमा सुरक्षाको ग्या'रेन्टी गर्न त्यहाँको तीन समूहका त
काठमाडौं : देशभर २४ घन्टामा आज ६ हजार ६ सय ३६ जना संक्रम'णमुक्त भएका छन् । योसँगै हालसम्म संक्र'मणमुक्त हुनेको संख्या ४ लाख ९० हजार ६ सय ९ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । आज नेपालमा ३ हजार ४ सय ७९ जना को'रोना सं'क्रमित थपिएका छन् । योसँगै कुल संक्रमि'तको संख्या ५ लाख ८८ हजार ५७९ पुगेको छ । मन्त्रालयको १० हजार ४ सय ७१ जनाको पि'सीआर परिक्ष'णमा ३ हजार ४० जना र ३२ सय ६२ जनाको एन्टिजेन परि'क्षण गर्दा ४५५ जनालाई सङ'क्रमण पु'ष्टि भएको हो । २४ घन्टामा ६६ सय ३६ जना संक्र'मणमुक्त भएका छन् । को'रोना संक्र'मणबाट आज थप ९९ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोना संक्र'मणबाट नेपालमा मृ'त्यु हुनेको संख्या ७ हजार ८ सय ९८ पुगेको छ । -रिपोर्टस क्लब